Alaab-qeybiyeyaasha - Soosaarayaasha Alaabada OEM
Qalabaynta Hydraulic-ka waxaa loogu talagalay in lagu burburiyo shubka la xoojiyay, waxaana si ballaaran loogu isticmaalaa duminta dhismaha, alwaaxda warshadaha iyo tiirarka; burburin iyo dib-u-warshadayn shubka la xoojiyay.
HMB qashinka baaldi walxaha waxaa ka mid ah qodista baaldi, baaldi dhagax, clamshell iyo baaldi janjeeri oo loo habeeyay si ay u habboon mashiinkaaga iyo in la buuxiyo shuruudaha mashaariicda aad.
qodista dhulka auger
Ku xirnaanta halista ah ee deyrka, qurxinta dhirta, dhir beerista, caajis wanaagsan, aasaaska aasaaska iwm. Si fudud u fuulashada iyo kala soocidda qodista ceelasha ayaa u dhexeeya 1.5 illaa 40 tan.
HMB degdegga ayaa si weyn u hagaajin kara waxqabadka qodista. Ka dib markaad isku ururiso HMB xajin deg deg ah, waxay si dhakhso leh isugu xidhi kartaa lifaaqyo kala duwan oo qodista sida baaldiyo, rippers, haadiyada kala jebiya, qabatooyin, xiirid Haydarooliga, iwm.
HMB qotoma wuxuu burburin karaa dhulka barafoobay, dhagaxa duugoobay iyo qashinka dhulka.
HMB Hantidhawraha dhismaha ee Haydarooliga waxaa loogu talagalay in lagu dheereeyo kala duwanaanshaha qodista iyo rarka gadaal si loo buuxiyo shuruudaha wax soo saar sare ee mashaariicda injineernimada.
HMB xijaab-duminta hidda-socodka waxay taageertaa qaabeynta is-dhexgal badan. Waad u adeegsan kartaa xiiritaanka duminta HMB ee humaagga si aad u qabato shaqada duminta sida burburin iyo kala soocida shubka la xoojiyay, kala furfurida gawaarida duugoobay, jarista alwaaxda birta ah ee dhismaha iyo wixii la mid ah.
HMB waxay bixisaa noocyo badan oo qabatimo hawo-dhaqameed ah, waxay ku takhasuseen rarida, dejinta iyo maaraynta biraha duugoobay, dhagaxa, dhuumaha, qoryaha, iwm.
SCT Haydarooliga qabsado
diirnaan diir oranji ah